गीतसंगीतमा नै जिबन बिताउनेछु :– गायिका बर्षा शिलवाल - Janapukar
गीतसंगीतमा नै जिबन बिताउनेछु :– गायिका बर्षा शिलवाल
नेपाली लोकसंगीत क्षेत्रमा काठ क्षेत्र भनेर चिनिएको बागमती अंचलको ललितपुर जिलामा जन्मिएर लोकसंगीतमा अहोरात्र लागिरहेकी गायिका बर्षा शिलवाल दर्शक नचाउने तयारीमा छिन । हुन त गायक गायिका अझै भनौ कलाकारको काम नै दर्शक श्रोतालाई नचाउने अनि हसाउने हो । तर पनि गितसंगीत धेरै किसिमका हुन्छ । त्यहि परिस्थितिमा गायिका बर्षा शिलवाल आफ्ना दर्शक श्रोताको लागि नाच्ने अनि नचाउने खालको गित लिएर आउदै छिन ।
प्रस्तुत छ जनपुकार डट कमको लागि किरण अधिकारीले गरेको कुराकानी ।
के गर्दै हुनुहुन्छ रुआराम हुनुहुन्छ नि ?
- एकदम आराम छु । कलाकारको काम उही हो गित संगीतमा नै व्यस्त छु । केहि समय भित्र नै नया एल्बम निकाल्ने तयारीमा छु । अहिले त्यता नै व्यस्त छु भन्दा फरक नपर्ला ।
कस्तो खालको एल्बमको तयारीमा हुनुहुन्छ ?
- समाजलाई पाच्य हुने खालको अनि गाउघर अनि सामाजिक परिवेशलाई समेटेर तयार पारिएको शब्दलाइ गीतमा ढालेको छु भने अर्को एउटा सत्य घटनामा आधारित गित बजारमा ल्याउने तयारीमा छु । जुन गितले दर्शक र श्रोता नचाउने छ ।
अहिले जताततै मेला महोत्सबको सिजन छ ,त्यता कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ ?
- हजुर हो ,अहिले सिजन हजुरले भन्नु भए जस्तै हो । तर त्यस्ता कार्यक्रममा सेलिब्रेटी अनि चर्चित मात्र खोजिन्छ । तै पनि कुनै कार्यक्रमहरुमा भने सम्झेर बोलाउनु हुन्छ । मेला महोत्सबमा सोचे जस्तो जान पाईएको छैन ।
कलाकारहरुको त कमाउने सिजन हो रे ,कतिको भयो कमाई ?
- कार्यक्रमहरुमा जाने भएकोले कमाउनु भयो होला भनेर सोध्नु स्वाभाविक हो । तर पनि सोचे अनुरुप छैन । कमाई र खर्च बराबर नै छ ।
किन निरासाजनक कुरा गर्नु भयो त ?
- त्यस्तो हैन । किनकी कार्यक्रमहरुमा जाने वाताबरण भएन । मेला महोत्सब बाहेक अन्य सास्कृतिक कार्यक्रममा जादा कति नै कमाईन्छ भन्न खोजेको मात्र हो ।
फरक प्रसंगमा जाउ ,यो क्षेत्रमा बिशेसगरि महिला कलाकारको शोषण हुन्छ भन्छन नि ?
- मैले पनि सुनेको छु शोसन हन्छ भनेर तर त्यो कुरामा म के भन्छु भने यो कुरामा आफै सजग हुनु पर्छ । आफुलाई परेको पनि छैन । यो कुरामा आफुमा पनि भर पर्छ ।
कलाकार हुनलाइ के के चिज आवस्यक पर्छ ?
कला गला र प्रतिभा हुनु पर्छ । अनि त्यो सम्बन्धि ज्ञानको आवस्यकता पर्छ । त्यो चिज बिना अपुरो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
रुप र पैसा भए पुग्छ भन्छन ? कुरो के हो ?
- त्यो कुरामा म बिस्वाश गर्दिन । तर पनि कुनै त्यस्ता व्यक्ति चर्चामा आयो भनेर भनेको पनि हुन सक्छ । तर त्यो क्षनिक मात्र हुन्छ ।
नया आउने अनि यो क्षेत्रमा आउन चाहनेहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
- यो क्षेत्रमा आउदा बुझेर मात्र आउनुस त्यतिकै प्रवेश नगर्नुस । तालिम लिएर आफु भन्दा सिनियर कलाकारसँग बुझेर अनि सिकेर मात्र आउनुस भन्छु ।
गीतसंगीतले तपाईलाई के दियो ? अनि तपाईले के दिनुभयो ?
- गीतसंगीत अनि कला क्षेत्रले मलाइ बर्षा शिलवाल भनेर चिनाएको छ । कलाकारको परिचय दिएको छ । मैले सोचे अनुसार केहि दिन सकेको छैन तर संगीत क्षेत्रको लागि पनि मैले सक्ने योगदान दिन्छु ।
कला र संगीत क्षेत्रमा हुनुहुन्छ ,आफ्नो काममा कतिको सन्तुस्ट हुनुहुन्छ ?
- एकदम धेरै सन्तुस्ट छु । किनकी मेरो सानो देखिको रहर अनि ईच्छा पनि यहि त्यसैले आत्मासंतुस्तिको लागि पनि म यो क्षेत्रमा लागेको हु ।
- खासै त्यस्तो ठुलो योजना केहि छैन । गीतसंगीत क्षेत्रमा नै रहेर जिबन बिताउने योजनामा छु ।
केहि कुरा बाकि छ भन्नुस ?
- सबै कुरा आएकै छ । कलाकारलाई माया गरिदिन अनि हौसला दिन अनुरोध गर्छु । अनि मेरो कुरा राख्न दिनु भयो त्यसको लागि तपाइँ अनि संचार सस्थालाई धन्यवाद ।